ЗЕМЛЯ НИМА ( NEEM LAND Travels & Tours company Ltd )
Программа Путешествия (5 days sightseeing and5days at the Famous beach Ngapali in Myanmar)
DD/MM/YY ( ......../........)
Вы прилетите 25 окт в 22.30. Я вас встречаю, ночью в отеле , из него мы выезжаем утром 26 окт.
Завтрак .Экскурсия по Багану -ropоду храмов и пагoд 11-13 вв., многие их которых являются настоящими чудесами архитектуры своего времени.В прошлом это столица первой бирманской империи.Вы посетите местный рынок NYАUNG-U .Вас ждет самый nосещаемый храм Багана сверху до низу покрытый золотом SHWEZIGON PAGODA (11 в),хранящий в себе священную реликвию -копию зуба Будды,WETKYI-IN GUBYAUKGYl, славящиеся древними уникальными фресками и лабиринтами коридоров с настенной росписью коридоров (13 в), древний красивый храм НТILOMINLО, АANANDA с 4-мя золотыми статьями Будды, символизирующими разный жест статуей Будды,THETBYINNYU самый высокий хром в Багане,MANUHA ,отличающийся уникальной конструкцией и отсутствием внешнего декора. После обеда в деревне MYINKABA ,мастер-класс по изготовлению знаменитых лаковых миниатюр и изделий из бамбука.В своей гостинице Check in. Вечером мы поедем на повозке и насладитесь потрясающим видом заката с Пагоды SHWESANDАW. Ночь в отeле.
Завтрак. Трансфер в аэропорт и перелет в аэропорт МАНДАЛАЙ. Прибытие в Мандалай (осн . 1857 г)-в прошлом столицу Бирманской империи, ныне коммерческий и культурный центр, второй по величине город страны. После гостиницы, Посещение Пагоды MAHAMUNI,известной своей 4-метровой самой почитаемой статуей Будды, покрытой золотом, затем. прошлом столицу Бирманской империи, ПО второй 4-метровой самой Посещение пaоды MAHAMUNI, известной своей почитаемой статуей Буин, покрытой золотом; затем посещение монастыря SHWE NAN DAW KYAUNG(«Золотой монастырь»), великолепного образца традиционного бирманского деревянного зодчества. Далее посещение пагоды KUTHODAW. известной как самая большая в мире «книга», состоящей из 729 мраморных плит с текстами буддийского священного писания . После обеда Во второй половине дня переезд(11 км от Мадалаи) в Амараnуру( город бессмертия, осн. в 1783г.), знаменитый производством шелка, дважды являлся столицей бирманского королевства(1783 1823; 1841-1860). Посещение главной достопримечательности города - самого длинного в мире деревянного моста У БЕЙН (1200 м),сделанного из тика (построен в 1782 г),пересекающего озеро Таунтаман, где вы сможете полюбоваться на сказочно красивый закат. При желании у вас будет возможность воспользоваться услугами лодочников, которые предложат прокатиться на их лодках, напоминающих венецианские гондолы, и сделать незабываемые фотографии .Возвращение в Мандалай.Ночь в отеле.
Завтрак , Экскурсия в г.Maнrун(12 км от Мандалая) древнюю королевскую резиденцию. круиз по реке Иравади и знакомство с основными достопримечательностями Мингуна. Вы побываете в Мингун-Пайя недостроенной ступе(1790-1813гг.), которая должна была стать самой высокой в(150 м), и увидите знаменитый гигантский мире колокол(90 тонн), отлитый Для нее в 1808-1810 гт. В северном районе Минryна на западном берегу р. Иравади .Вы посетите необычную белоснежную Пагоду MYATHEINDAN(HSIBYUME) в окружении семи волнистых террас. символизирующих бесконечность космоса, и пагоду SETTAWAYА со следом Будды в мраморной плите.
Вин Мьянма @facebook.com
Во второй половине дня ,после обеда поездка в ещё одну бывшую древнюю столицу - Саraй небольшого царства, образовавшегося после падения империи Багана и одно время ставшей столицей всей религиозного уединения, где расположены многочисленные центры медитации и более 500 буддийских монастырей ,где проживает более 6000 монахов и монахинь.Вы увидите пагоды SOON U PONYA SHIN PAYA и U MIN THОNSE PAGODA.
Завтрак. Трансфер в аэропорт и перелет в аэропорт Хехо. Трансфер в г.Nyaungshwe,где находится причал (около 1 часа ). По пути посещение деревянного монастыря ШВЕ ЯН ПЬЕ .Далее переезд на лодке по озеру Инле в отель.
Озеро Инле(22 км в дину и 11 км в ширину, 875 м над у.м.) окружено высокими горами, пo eго берегам расположены несколько деревень, жители которых в прямом смысле слова живут на воде. Всe Здесь необычно. Они строят бамбуковые хижины с тростниковыми крышами на сваях, забитых в дно озера, выращивают цветы и овощи на плавучих городах, плетя«грядки» из тростинка и наполняя их плодородным илом. Для передвижения по глади озера жители Инле используют быстроходные лодки , применяя не ручной, а ножной способ гребли и конечно, ловят рыбу, используя необычные снасти. Природа здесь так же сказочно красива, особенно на закате ,когда солнце скрывается за горами, подсвeчивая воду фантастически синим светом... Посешение монастыря NGA PHE CHAUNG, известного не только своими деревянными статуями и уникальной резьбой по дереву, но и дрессированными кошками, умевшими прыгать на большую высоту,Пагоды Фаунгдо У(самая почитаемая пагода по озеру. После обеда , Вы побываете дерeвне INPHAWKHON , Жители которой занимаются ткачеством и используют лепестки лотоса при зигoтовлении шелка,производство серебряных изделий, Производство Бирманских черту сигары И Магазин ,где работают Длинношеи- одна из необычных национальность. (Ткачихи-падаунги из деревни ИВАМА), Затем вы увидите плавучие огороды, прямо на воде как они выращивают .Ночь в отелe.
Завтрак . Трансфер в аэропорт. Перелет в Тандвэй, где находится море.Трансфер в отель (вам нужно заплатить там мальчику когда прибытие в аэропорт моря).Бич по имени Нгапали -самом известном пляже Мьянмы.
Завтрак .Трансфер в аэропорт и перелет в Янгон(рейс K7-245). Прибытие в Янгон в 12:50.Вас будет приветствовать гид в аэропорту. (По вашей просьбе магазин по именим
《Lady Luck》,часто ходят люди из посольства.
68/B, Kaba Aye Pagoda Rd., Corner of Saya San Rd., Sasana Yeikthar Ward, BHN, Yangon, Yangon, Myanmar .)
После обеда в Янгоне вы посетите известный рынок Bogyoke,где у вас будет возможность приобрести сувениры. .Затем увидите самую великолепную Пагоду Шведагон,которая построена 2600 тому лет назад. Посещение Янгона считается не полным без посещения Шведагона.
Трансфер в аэропорт и вылет рейсом ...... в Москву через Сеул .
ВНИМАНИЕ : Ограничение по весу багажа на внутренних рейсах : 20 кг.
Вин Мьянма@ facebook.com
Posted by lwanthukha at 7:22 PM No comments:
'' Какая страна Мьянма !!!!!''
Где удивительных достопримечательностей по всему миру ? Как Знакомство с ними?
Страна, которая была основана так много пагод ,
люди никогда не думали сам себе, но не Будде.каждая пагода была построена в 11 веке и более 1000 лет назад...2237 пагод в Багане Вы можете видеть везде много пагод
Снимали на памятьв пагоде...;-)
Posted by lwanthukha at 8:05 AM No comments:
''Дорогая Моя Гуля''
Это называется капельница на русском языке.Красная жидкость Медицинская поступали в мое тело. Я думаю, как я мечтал так долго. Это была мечта кровать рядом со мной. Я так устал от наблюдения глядя на нее, которая лежала на кровати мечтой. Ее прекрасные черные глаза были скрыты от меня, а затем встретились друг с другом.
Posted by lwanthukha at 3:42 AM No comments:
´Conflict များနှင့် ကခုန်ခြင်း´
ကျွန်တော် တက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ Myanmar Development Resources Institute (MDRI) လက်အောက်မှာရှိတဲ့ Center for
Strategic and International Studies (CSIS) ကဖွင့်လှစ်တဲ့ အမှတ်စဉ်(၂) The School of Peace,Democracy and Development သင်တန်း
ကျောင်းလေးတစ်ခုပါ။သင်တန်းမှာ သင်ကြားတဲ့ဘာသာ အဓိက ဘာသာရပ်တွေကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ တို့ဖြစ်ပြီး
ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် ဘာသာခွဲ(၄)ခု ၊ ဒီမိုကရေစီ တွင်ဘာသာခွဲ (၇)ခု ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဘာသာခွဲ (၄) ခုဖြင့် စုစုပေါင်း ဘာသာခွဲငယ် (၁၅)
ခုတို့ အားအခြေခံထားပြီးသင်ကြားပို့ ချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ငြိမ်းချမ်းရေး တွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ ၊ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်အောင် လုပ်မလဲ စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တွင်လည်း ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အခြေခံလို အပ်ချက်များဖြစ်သော
သန့်ရှင်းသောအစိုးရအဖွဲ့ ၊ ကောင်းမွန်သော အစိုးရစနစ် ၊နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး နှင့် အခွင့်အလမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးထားမူ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမည့်
တာဝန်ခံမူ၊အစိုးရအဖွဲ့ ၏တာဝန်ယူမူ၊ စသောအချက်တွေ့ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ နှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ကောင်းမွန်သော လူမူ့အဖွဲ့အစည်း
စနစ်များမည်ကဲ့သို့တည်ထောင်ရမည်နည်း၊သူများနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမူ မော်ဒယ်တွေက ဘာတွေလဲ ၊ မူဝါဒချမှတ်သူ (Policy Maker) တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဌ
က နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အတွက် ဘယ်လောက် အရေးပါ သလဲ ၊စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ (Economic Development) ကို ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်တိုင်းပြည်
အနေအထားနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဘယ်လို ဖော်ဆောင်မလဲ စသော အချက်များပါဝင်သည်။ အထူး သဖြင့် ဒီသဘောတရားလေးတွေ ကို သက်ဆိုင်ရာ
Sector အသီးသီး က မူဝါဒဖော်ဆောင်သူတွေ၊မူဝါဒ ချမှတ်သူများသိစေချင်ပါသည်။ကျွန်တော်လွမ်းသုခ သိလျှင်ဖြင့် တိုင်းပြည်ကြီးမည်သို့မျှ နေလိမ့်
မည်မဟုတ်ဟု ယူဆသောကြောင့် ဤ စာအားရေးသားရပါသည်။
ဒီပုံလေးတွေက တော့ တိုးပြည်အတွက် အာမလိုအားမရဖြစ်ယင်း တစ်ဦးအမြင်တစ်ဦး ဝေငှ နေကြသော သင်တန်းတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်
ကလေးများပါ ကျွန်တော်က Conflict များနှင့် ကခုန်ခြင်း လို့အမည်ပေးထားပါတယ် ခံစားပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by lwanthukha at 4:48 AM No comments:
`ဒီမိုကရေစီ သွေးနုသားနုအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး နှင့် သူ၏ရင်ဝယ်သားများ´
ယနေ့ ဒီအချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အရေးကိစ္စကို လှည်းနေ လှေအောင်းမြင်းစောင်းမကျန် ကလေးလူကြီးကအစ စိတ်ဝင်တစားရှိကြတယ် လို့ဆိုယင် မှားမည်မထင်။ပြည်သူပြည်သားတိုင်းပြောင်းလဲ မူ့တစ်ခု၏ အငွေ့အသက်အချို့ ကို အနည်းနှင့်အများ ခံစားလာကြရသည်။ဒီပြောင်းလဲမူကို ကျွန်တော်
ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲ မူလို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပါ့မယ်။ ဟုတ်ပြီ...ဒီမိုကရေစီဆိုသည်နှင့်ပြည်သူကို
လောက်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘာဆိုးမွေ၊ကောင်းမွေ တွေရခဲ့သလဲဆိုတာ ထက် ဘာသင်ခန်းစာတွေ ရခဲ့သလဲလို့ ဖော်ထုတ်ပြီး ဒီပြောင်းလဲ မူ့မှာပြုပြင်အသုံးချသွားဖို့သာ လိုပါတယ် ။ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလည်းခက်ခဲမူ့တွေ ကြမ်းတမ်းမူ့ တွေ စိန်ခေါ်မူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေမမေ့သင့်ပါဘူး။အဖွဲ့အစည်း(Institution)တွေဟာ နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (Constitution) တွေကို အမှန်တကယ် နားလည်လက်ခံပြီး နိုင်ငံ ရဲ့ ရည်မှန်းချက်
(Mission)ကိုမသွေဖယ်ဘဲ တစ်ပြိုင်တည်းသွားနေကြယင် အဘယ်သို့သော အမြင်မတူမူ (Conflict)
အဓိက(Institution)တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကမဏ္ဍိုင်(Pillor) ကြီး(၃)ခုအဖြစ် သတ်မှတ်
(၁) လွတ်တော်/ဥပဒေပြုအဖွဲ့ မဏ္ဍိုင် ( Parliament )
(၂) တရားရေးမဏ္ဍိုင် ( Judiciary )
(၃) အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် ( Executive ) တို့ ဟာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဘယ်လောက်ထိ ချိတ်ဆက်လည်ပတ်နိုင်သလဲ၊ ပင်နယံ(၃)ခုဆိုပါစို့၊ အစိတ်ကလေးတစ်စိတ် လည်ပတ်သွားတိုင်း၊
ဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုရှိသွားတိုင်းမှာ တိုင်းပြည်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မူ(Impact) ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ၊ ချိတ်ဆက်ထားသော အခွင့်အာဏာ( Embedded autonomy ) ဘယ်လောက် မျှတစွာခွဲဝေထားလဲ၊ စိန်ခေါ်မှူု့တွေ(Challenges ) ကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ နဲ့တုန့် ပြန်မလဲ ဆိုသော အချက်များသည် လွန်စွာအရေးကြီးလှသည် ။(ဥပမာ ပေးရလျှင် လူမျိုးစုပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ဟာ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော လူမျိုးစုများဖြင့်စုစည်းထားသော တိုင်းပြည်( State nation )ဘ၀ကနေ (one country -one nation) လို့ ခေါ်တဲ့ (Nation state )စနစ် ကိုဦးတည်သွားနေတာလား၊ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံ တိုင်းပြည် ( Muti national state ) စနစ် ကိုဦးတည်
သွားနေတာလားဆိုတဲ့ ပြသနာဟာလည်း စိန်ခေါ်မူတစ်ရပ်ပင်။)။တိုင်းပြည်တစ်ခု ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမူ
( Transparency ) တိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ အစိုးရ အဖွဲ့ ရဲ့ တာဝန်ရှိ ခြင်း( accountability ) နှင့် တာဝန်ခံခြင်း ( responsibility ) စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာပေမည်။ ယခုကာလ အစိုးရ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်း တိုင်းပြည်အပေါ် ဘယ်လောက် အကျိုးသက်ရောက်မူ ( Impact ) ရှိသလဲ ဆိုသည် မှာအားလုံးမျက်မြင်ပင်။လက်ခံတဲ့သူ ကျွန်တော် အပါအ၀င် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာပါ ။လူကိုလက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူး။ မူကိုကြိုက်တာပါ။အရိပ်တကြည့်ကြည့်စောင့် ကြည့်နေဆဲ ကာလဖြစ်သလို အစိုးရအပိုင်းမှာအခက်အခဲ တွေအများကြီးရှိတယ် ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါ ဘူး။ Social system မှာ စနစ်တကျနဲ့ ပျက်ယွင်းနေတာကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှာ လဲ၊ ကျွန်တော် တို့ဟာအာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုကိုကျော်ခဲ့ပြီ၊ပြည်ဖုံးကားချထားလိုက်ပြီဆိုခဲ့ယင် ၊ဒီစနစ်တကျ ပျက်စီးမူတွေ ကို ဘယ်လိုတားဆီးမှာလဲ၊ရေစီးချောင်း၊မိုးခါးရေတွေကို ဘယ်လိုသန့်စင်မှာလဲ ၊စေတနာတစ်ခုနဲ့ဘဲ လာဘ်စားမူ (corruption)တွေ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား (Ethic) ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုလို့
အော်ပြီးပြည်သူ့ဝန်ထမ်းလို့အမည်တပ်ပြီးကိုယ်ကျိုးကြည့်သူတွေကိုအကုန်ဖြုတ်ထုတ်သတ်လုပ်မယ်ဆိုယင် လည်း အာဏာရှင်စနစ်လို့ ဆိုဦးမယ်။ ဒါကအာဏာရှင်စနစ် ကတည်းက စနစ်တကျနဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်ပါ။ဒီအချက်ကတော့ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ကောင်းကွက်ပေါ့။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ ကနောက်ပြန်မလှည့်ကြေး ဒီမိုကရေစီယန္တရားကိုစတင်လည်ပတ်နေပြီဆိုသောကြောင့်တော်လှန်ခြင်း
(Revolution)မလုပ်ဘဲ၊ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းလဲတဲ့စနစ် (Evolutioan) နဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားကြမယ်။
ဒါက မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတိုင်း တစ်ဦးချင်း ၊တစ်ဖွဲ့ ချင်းဟာ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာတောင် ငါ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာနိုင်ငံနဲ့ယှဉ်တယ်၊နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ အတွေးမျိုးကိန်းအောင်းနေဖို့ လို ပါတယ်။တစ်ခုများတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဖြစ်သေးပါဘူး။ ခုမှလမ်းကြောင်း
ကိုလျှောက်လှမ်းနေကြတာပါ။ ဒီအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီရင့်သန်နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဘာတွေမရလို့၊ဘာတွေမလုပ်ပေးလို့၊ ဘာမလုပ်ရလို့၊ညာမလုပ်ရလို့၊ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်စည်းမျဉ်းနဲ့ မကိုက်ညီလို့လို့လက်ညိုးထိုးအော်နေကြမယ့်အစားအစိုးရဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိသလဲ၊
ဘယ်အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေသလဲ၊ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။အော် တာကောင်းပါတယ်၊
လက်ခံလို့ရတယ်။ သဘောထားကွဲလွဲမူ(Conflict)တွေကိုလျှော့ချလို့ရမယ်။ အဲ့ဒီလို တူတာတွေယူပြီး
ညီညွတ်မူလုပ်ရမယ် ။ညီညွတ်ကြမှလည်း ခိုင်မာလာမယ်။ယုံကြည်ချက်တူတယ် ၊ခိုင်မာရင့်သန်မယ်ဆိုယင် ဘယ်လိုဘဲစနစ်တကျနဲ့ပျက်စီးနေပါစေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နိုင်ငံရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမူ (Democracy Culture)လေးတွေကို ၀ိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်းပေးရမယ်။တည်ဆောက်
Posted by lwanthukha at 8:44 AM No comments:
သူတို့ အခေါ်တော့ ကာပြင်ညီစာပေါ့၊အနီရောင်ဆေးရည်တွေ ခန္ဒာကိုယ်အနှံ့စီးဝင်နေတယ်။ဒရင်းဘတ် ပေါ်မှာသက်တောင့်သက်သာနေရတယ်ဆိုပေမယ့်
ဆေးတစ်ပုလင်းလုံးကုန်သွားအောင် ငြိမ်သက်နေရတာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အိပ်မက်ရှည်တစ်ခု(дленный сон)မက်နေရသလိုပါဘဲ။ကျွန်တော့်ဘေးမှာ
နောက်ထပ် ဒရင်းဘတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဒရင်းဘတ်လေးပေါ်ကို ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေမရောက်မိအောင်ထိန်းနေရတာ ပင်ပန်းလှပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လှပတဲ့ သူမရဲ့
မျက်ဝန်းနက်နက်လေးတွေကို ရှောင်ဖယ်ယင်း သူနဲ့ကျွန်တော် ဆုံဆည်းခဲ့ကြတယ်....
ဒီနေ့တင်းနစ်ရိုက်ရတာခါတိုင်းနေ့တွေထက် လန်းဆန်းတက်ကြွနေမိတယ်။မြင်ရခဲတဲ့ သူမရဲ့အပြုံးလေးတွေအောက်မှာ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော့်လက်ထဲက
`မတတ်နိုင်ဘူး သူငယ်ချင်းရေ ဒီနေ့ငါ့အတွက်လှပတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဘဲ၊မင်းငါ့ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး´
ကျွန်တော့်ပြောတော့ အန်ဒရေ့က ရယ်ယင်း
တင်းနစ်ဘောလုံးလေး ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးလွှားနေသလို ကျွန်တော့်စိတ်တွေလည်း ပြေးလွှားခုန်ပေါက်နေလေရဲ့။တစ်ခါတစ်ခါသူမရှုံးသွားတဲ့အခါ
`တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ၊ကျွန်တော် နာမည် လွမ်းသုခပါ။လွယ်လွယ်ကူကူ လွမ်းလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ´
`ကျွန်မနာမည်ကတော့ ဂျွန်နေးပါ ခက်ယင် ဂူးရာ လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်...၊ကျွန်မလည်းတွေ့ရတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်´
ဒီလိုနဲ့ တစ်ဦးရဲ့အသိမှာ တစ်ဦး ကမ္မည်းထိုးခဲ့ကြတယ်။
အချို့ အပင်တို့သည် အဖြူရောင် အမှုန်လေးများအားမြေပြင်ပေါ်သို့ခါချနေသည်။အစပိုင်း၌လေအဝေ့တွင်ပါလာသော
`ဂူးရာ ၊ကျွန်တော်ကို ပု (пук)တွေကတော်တော်နှောက်ယှက်တယ်ဗျာ။´
`ကျွန်မတို့ဆီမှာအဲ့ဒါကို နွေနှင်းမှုန် (летный снег)လို့ခေါ်တယ် ကြည့်ပါလား နှင်းတွေဝေနေသလိုဘဲ ´
`ကျွန်တော် ပညာသင်နေတာပါ၊ မော်စကိုတက္ကသိုလ် ရူပဗေဒ ပထမနှစ်ပါ ´
`လုပ်ပြီဗျာ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်မပြုရသေးပါဘူး ဂူးရာ´
`ဒီလက်စွပ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးထားတာပါ လွမ်းဒီလက်စွပ်လေးကို မြတ်နိုးတယ် ရွှေမဟုတ်ပေမယ့် ဒီလက်စွပ်လေးဝတ်ထားယင်
လွမ်းဘ၀ဘယ်လိုကြမ်းခဲ့လဲ ...လွမ်းဘယ်ကလာလဲ ဆိုတာ အမြဲ အမှတ်ရစေတယ်´
`ဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်...ဘ၀ဆိုတာအခက်အခဲတွေရှိမှ ၊ကြမ်းတမ်းမူ့တွေရှိမှ ပျော်စရာကောင်းတာ...အရည်အချင်းရှိတဲ့သူ က ဘယ်နေရာရောက်
ရောက်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဘဲ ကြုံကြုံ အမြဲတမ်းအောင်မြင်နေမှာပါ´
ဘယ်သူနဲ့မှမတူသောသူမ ရဲ့အားပေးစကားလေးက ရင်ထဲ ကိုစူးနစ်စေသည်။
`ဆေးတွေက တော့နည်းနည်းပြင်းတယ်၊အစပိုင်းတော့ မင်း ခေါင်းမူးတာတို့ ၊အားနည်းတာတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်
`ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကို ဂရုစိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...ကျွန်တော် ဒီမှာဘယ်နှစ်လ လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ သိပါရစေ´
`အဲ့ဒါ အတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးကွ ...မင်းရဲ့ရောဂါအခြေအနေတိုးတက်မူ့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့မင်းဒီမှာ
နေ့တိုင်း မနက်(၁၀)နာရီဆို ဆရာဝန်များကသက်ဆိုင်ရာ လူနာတွေရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးရတယ်။ခုလည်း ဆရာဝန်လာစစ်ဆေးတုန်း
ကျွန်တော်သိလိုသည့်အကြောင်းအရာများအားမေးမြန်းမိသည်...။အနည်းဆုံးခြောက်လလောက်ကြာမယ်ဆိုယင်တော့ ဒီဆေးရုံကြီးမှာ ပျင်းနေအောင်
တော့နေရပေဦးမည်...၊ကျွန်တော့် မှာ စိတ်ဓာတ်ကျတာတို့ အားငယ်တာတို့တော့မရှိပါဘူး ။ဒါပေမယ့် အထီးကျန်ဆန်တဲ့ဘ၀ကိုတော့ ကျွန်တော်
မုန်းတယ်...။ဘယ်ကနေဘယ်လိုရလာမှန်းမသိတဲ့ ဒီတီဘီရောဂါ ကြောင့် ကျွန်တော်ရုရှားနိုင်ငံ ရဲ့တီဘီအထူးကုဆေးရုံကြီးပေါ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းပါ။
ကျွန်တော်ဆိုတာက ရုရှားသို့ပညာသင်စေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့ မြန်မာအရာရှိငယ်တစ်ယောက်ပါ...။စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အလွမ်း
`ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ထတော့ ဟိုမှာ နံနက်စာက ငါတို့ ကိုစောင့်နေပြီ´
`ငါကနိုးနေပါပြီ စောသေးလို့ လှဲနေတာ ...ဟိုကောင် ဂျိမာ ကိုသာရအောင်နိုးပေတော့´
အန်ဒရေ့ က ဂျိမာအားမေးဆတ်ပြယင်း လှမ်းပြောသည်။
`ဟော...ဂျိမာနိုးလာပြီ ၊ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါဂျိမာ ၊ခဏနေ နံနက်စာသွားစားဖို့ထတော့ ´
`၀ါး...ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ သူငယ်ချင်တို့ ´
အိပ်ရေးမ၀သေးသော ပုံစံဖြင့် အားလုံးကို နှုတ်ဆတ်ယင်း အားယူ၍ထလိုက်သည်။
ကျွန်တော် နေသောအခန်းလေးက (၃)ယောက်ခန်း။နိုင်ငံခြားသားဆိုလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ဘဲ ပါတယ်။အစပိုင်းတော့
ကျွန်တော့် အတွက်တော့အခက်အခဲ ရှိသည် နောက်တော့ ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိသော သူငယ်ချင်းများကြောင့်ကျွန်တော် နေသားတစ်ကျဖြစ်လာ
သည်။နံနက်စာအတွက် စားသောက်ခန်းသို့ သွားယင်း လမ်း၌ တွေ့ဆုံသောသူငယ်ချင်းများအား နှုတ်ဆတ်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတွေ့ဆုံ
ကြသည့်အခါ အများအားဖြင့်အပြုံးဖြင့်သာနှုတ်ခွန်းဆက်လေ့ရှိသည် ။ရုရှားနိုင်ငံ၌ ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ ၊ကောင်းသော ညနေခင်းပါခင်ဗျာ စသဖြင့်နှုတ်ဆတ်ကြသည်။
`ဟုတ်တယ်လွမ်းရ လေကောင်းလေသန့်လေးဘာလေးရှူရအောင်လေ ...လွမ်းရောလမ်းလျှောက်ထွက်လာတာလား
`ဟုတ်တယ်အခန်းထဲ မှာ နေရတာထက်စာယင် ပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်တာပေါ့´
`လွမ်းရဲ့ ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရော တိုးတက်မူ့ ရှိရဲ့လား´
`အယင်က ထက်စာယင်တော့ အများကြီးတိုးတက်မူ့ ရှိပါတယ် ...အယင်က ဆို လမ်းလည်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ဘူး
တင်းနစ်လည်း အကြာကြီးမရိုက်နိုင်ဘူး၊ဒါပေမယ့်ဗျာ ခုရက်ပိုင်းတွင်း ကျွန်တော် သောက်တဲ့ဆေးထဲ မှာအသစ်တစ်လုံးတိုးလာတယ်ဗျ၊
အဲ့ဒီဆေးသောက်မိယင် နှလုံးကို တော်တော်လေးထိတယ်ဗျ...။´
`ဟုတ်လား...ဒါဆို ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောလေ...လွမ်းနဲ့မတည့်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ဘယ်လိုဆေးမျိုးပါလိမ့် ပန်းရောင်လေးလား´
စိုးရိမ်မူ့ဖြင့် အလောတကြီးမေးလာသောဂူးရာကြောင့် ကျွန်တော်ရယ်ချင်နေမိသည်...၊
`လွမ်းက မသောက်ဘူးလား ပြပါဦး ဘယ်မှာလဲ ´
ဂူးရာ ရဲ့ မျက်ဝန်းနက်နက်လေးတွေကိုရင်ခုန်စွာ ကျွန်တော် စိုက်ကြည့်ယင်း နူးညံ့စွာပြောနေမိသည်။
`ကျွန်တော်ဘေးမှာလေ ဂူးရာ ...အဲ့ဒီဆေးလေးက ဝေးဝေးမှာ ရှိမနေပါဘူး´
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲ မှအရိပ်လေးတစ်ခုအား သူမရှာလို့တွေသွားသည်။
`ကိုယ်က လွမ်းကို လူရိုးလေးလို့ထင်နေတာ´
`ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဂူးရာ ၊ကမ္ဘာဦးတုန်းကလည်း ဧ၀ က အာဒံကို လူရိုးလေးလို့ ထင်ခဲ့တာဘဲလေ´
ရှက်တဲ့အခါ ခြေလှမ်းမြန်မြန်လှမ်းတတ်သောဂူးရာ ၏ရယ်သံလွှင်လွှင်လေးက ရင်ကိုအေးမြစေသည်။
`အဲ့ဒီသီချင်းလေးရဲ့အဓိပ္မါယ်က အချစ်တွေက မျက်ဝန်းတွေကို တံခါးပေါက်အဖြစ်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပြီး ရင်ခုန်ခြင်းတွေကို နူးညံ့စွာနဲ့ ၀င်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်တဲ။့ငါရှိုက်လိုက်တဲ့ ၀င်သက်တိုင်းမင်းရဲ့
သီချင်းလေးက မြူးကြွနေသည် ၊သံစဉ်နှင့် ထပ်တူ လှပစွာ ကနေသော ဂူးရာ ၏လှုပ်ရှားမူ့တိုင်းသည် ကျွန်တော် အားအသက်ရှူမှားစေသည်။တစ်ချက်တစ်ချက် ကနေယင်းစွဲစွဲ ညို့ညို့
ကြည့်လိုက်သောအကြည့်တစ်ချက်သည် ကျွန်တော့်ရင်ကို ပရမ်းပတာဖြစ်စေသည်။
`ဂူးရာ မင်းကတဲ့ အခါ အရမ်းလှတယ် အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတယ် ´
`ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လွမ်း ...ရှင်လည်းကလေ ...လာပါ အတူတူကမယ်´
သူမဖုန်းထဲမှ သီချင်းအသံကို အနည်းငယ်ချဲ့လိုက်ယင်း ကျွန်တော်အား အတူကရန် လှမ်းခေါ်သည် ။
`ကျွန်တော် သိပ်မကတတ်ဘူး ဂူးရာ´
`ကြိုးစားကြည့်လေ နောက်တော့ ကတတ်သွားလိမ့်မယ်´
ကျွန်တော်လည်းရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် သူမနဲ့အတူတွဲကနေမိသည် .....၊ကျွန်တော်အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပေမယ့် ပျော်စရာကောင်း
`ဒီသီချင်းလေးကို ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တယ် ဂူးရာ ၊စာသားလေးတွေက နူးညံ့တယ် ´
`ရှင်နားထောင်ချင်ယင် ကျွန်မပေးမယ်လေ ...ရှင့် အမ်ပီသရီး ထဲ ထည့်ပြီးနားထောင်ပေါ့ ´
ကျွန်တော် တိုးတိုးလေး အနားကပ်ပြောယင်း တဒုန်းဒုန်းတဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ခုန်နေသောရင်ကို အပြစ်တင်နေမိသည်။
`ဂူးရာ မနက်ဖြန် နံနက်စာစားပြီးယင် မင်းကိုယ်နဲ့ ဒီနားက ဈေးဆိုင်လေးကို ခဏလိုက်နိုင်မလားကိုယ်မင်းအကူအညီနည်းနည်းလိုလို့ ´
`ဂူးရာ မင်းအခုဘယ်မှာလဲ ´
`လွမ်း ခဏလေးနော် ကျွန်မအ၀တ်လဲ လိုက်ဥိးမယ် နောက်၁၀မိနစ်နေယင် ကျွန်မ ဆင်းလာခဲ့မယ် ရှင်အောက်ကဘဲစောင့်နေနော်´
`ကောင်းပြီ ကိုယ်စောင့်နေမယ်ဂူးရာ ´
ကျွန်တော် ဖုန်းလေးကို ပိတ်ယင်းအောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည် ။
ဒီနေ့ က ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ ဆေးရုံမှာ လူတွေရှင်းနေသည်။အိမ်ပြန်တဲ့လူတွေလည်းပြန်ကြသည် ကျွန်တော် နဲ့ဂူးရာက မိသားစုနဲ့ အဝေးမှာနေနေရသူချင်းမို့
`အဟဲ နည်းနည်းကြာသွားတယ် အလှပြင်နေတာနဲ့´
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေသူမထံမှမခွာချင်လောက်အောင် သူမထံတွင် အလှတရားတို့ ပေါင်းစုနေလေရဲ့။
`ဂူးရာ ဒီနေ့ က ကိုယ့်အတွက် လှပတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ ဘဲ၊ပြီးတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူလျှောက်လည်တာ ဒါပထမအကြိမ်ဘဲ
ကိုယ်တစ်ခါမှ ဒီလို မသွားဖူးဘူး´
`လွမ်း...ရှင့်မှာ ပထမအကြိမ်တွေတော်တော် များမယ်နဲ့တူတယ်နော် ၊ကျွန်မနဲ့တွဲ က တာလည်း ပထမအကြိမ်ဘဲ ဆို၊´
`ဟုတ်တယ် ဂူးရာ ကိုယ့်မှာ နောက်ထပ်ပထမ အကြိမ်တွေ အများကြီးရှိသေးတယ် ၊သိချင်ယင်ကိုယ်ပြောမယ်လေ
ကျွန်တော့်ကို ပြုံး၍ကြည့်ယင်းလက်လှမ်းပေးသည် ၊ကျွန်တော် သူမလက်လေးအားမြတ်မြတ်နိုးနိုးဖြင့်ငုံ့နမ်းယင်းပြောလိုက်သည်...၊
`အဲ့ဒါလည်း ပထမအကြိမ်ဘဲ ဂူးရာ ´
`ကျန်တာတော့ မသိဘူး ရှင်တော်တော်လည်တာတော့သိတယ်´သူမကျေနပ်စွာပြုံးယင်းကျွန်တော့်အားလှမ်းပြောသည်။
ကျွန်တော်ပြန်ပြော ဖို့ စကားလုံးတွေပျောက်ဆုံးနေသည် ။အတိုင်းမသိခုန်နေသောရင်ခုန်သံကို သူမကြားသွားပြီလား။ထိန်းချုပ်ရတာများလာ
တော့ ကျွန်တော် သိပ်မထိန်းချုပ်ချင်တော့ ကျွန်တော့် နှလုံးသားကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တော့မည် ။
`ဂူးရာ ကိုယ်တို့ ဘယ်သွားကြယင်ကောင်းမလဲ´
`ဟောတော့ လွမ်းရှင်လုပ်ပြီ.....ရှင်က ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူလေ ´
လှလှပပ မျက်စောင်းလေးတစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော် ပြုံးမိသည်။
`ဆာကောညီကီ ပန်းခြံကို အရင်သွားကြမယ်ပြီးယင် ရုပ်ရှင် သွားကြည့်ကြမယ် ...အိုကေ´
ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်၍ပန်းခြံထဲတွင် လူစည်ကားနေသည် ။
`ဂူးရာ ...ဒီပန်းခြံထဲ မှာကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် ၊ကိုယ် မင်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်´
`အမ် ...ရှင့်သူငယ်ချင်း ဘယ်သူပါလိမ့် ၊သူက ပန်းခြံထဲမှာ စောင့်နေတာလား´
`ဟုတ်တယ်သူက ပန်းခြံထဲမှာ နေတာ တွေ့လားဟိုမှာ´
ကျွန်တော် ပန်းခြံထဲ မှ လီနင်ရုပ်ထုကြီးအားမေးဆတ် ပြ လိုက်သည်။
`ဟုတ်တယ်ဂူးရာ ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေကို သူသိတယ် သူနားလည်တယ်...
ကိုယ် သူ့ကိုမေးပြမယ် ကြည့်နေ´
`ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါလီနင် ၊ကျွန်တော့် အတွေးထဲမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်နှောက်ယှက်နေတယ်ဗျာ...၊
ကျွန်တော် မဖြေဘဲ အဓိပ္ပါယ်ပါပါ ပြုံးမိသည်။
`ဂူးရာ မင်းဆီမှာ အကြွေစေ့ရှိလား ၁ရူဘယ်လေ ´
ကျွန်တော် အိပ်ကပ်ထဲမှ အကြွေစေ့လေးအားထုတ်ယင်းလှမ်းမေးလိုက်သည် ။
ကိုယ်နဲ့ဂူးရာ အကြွေစေ့ချင်းလဲမယ်ပြီးယင် ဟိုးမှာတွေလားရေကန်အလယ်ကရေပန်းဆီကို ပစ်မယ် မပစ်ခင် ကိုယ်ပြောချင်တာကိုပြောရမယ်
အဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းက အဲ့ဒီအကြွေစေ့လေးနဲ့အတူ ရေကန်ထဲမှာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ကိန်းအောင်းနေလိမ့်မယ်။ကိုယ်အရင်လုပ်ပြမယ်ဂူးရာကြည့်နေ´
ဂူးရာ ကျွန်တော် ပြောသမျှကို ဂရုတစိုက်နားထောင်းယင်း ပြုံး၍ကြည့်နေသည် ။
ကျွန်တော် အကြွေစေ့လေးအား ကိုင်ယင်း သူမအနားသို့တိုးကပ်လိုက်သည်။နုနယ်လှပလွန်းသော မျက်နာပြင်ပေါ်ဝယ် ရှက်သွေးဖြာနေသည်...။ကမ္ဘာဦးကတည်းက ဖိုနဲ့မ
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးနားလည်လာကြသည့် သဘာဝတရား၏လျို့ဝှက်ချက် တစ်ခုပင်တည်း။
`ဂူးရာ ...ကိုယ်အချစ်ဆိုတာဘာလဲ ကိုယ်မသိဘူး...ကိုယ်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့ အချိန်တိုင်း...မင်းနဲ့အတူရှိနေတဲ့အခါတိုင်းမှာ ရင်ခုန်လှုပ်ရှားရတယ်
မင်းကိုယ့်အနားမှာ မရှိတဲ့အခါမှာလည်း မင်းကိုယ့်အတွေးထဲမှာ ရှိနေတယ်...။ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ဆိုတာ ကိုယ်မတွေးချင်ဘူး....ကိုယ့်အနားမှာ မင်းကို အမြဲ တမ်းရှိစေချင်တယ်
ကိုယ့်အတွက် ဒီထက်ပိုပြီးထ်ိန်းချုပ်ထားဖို့ က မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပါ´
ကျွန်တော် လက်ထဲမှ အကြွေစေ့လေးအား ရေကန်အလယ်သို့ပစ်လွှတ်လိုက်သည်...။
`ကိုယ်သိပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ် ဒါပေမယ့် ခံစားချက်တွေကိုက ဒီအတိုင်းမွေးဖွားခွင့်ပေးထားတာပါ...´
`ကျွန်မရှင့်ကို အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး တစ်ခါတစ်လေ ခံစားချက်တွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေခွင့်ပေးရတယ်...ရှင့်ကိုသာပြောတာပါ
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်လို့ ...ကျွန်မလည်း ရူးသွပ်တာပါဘဲ...
အကြွေစေ့လေးလေထဲ မြောက်တက်သွားပြီး ကန်ရေပြင်အလယ်ဆီသို့ ဦးတည်နေသည်...။
ပထမဆုံး ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ သို့ရောက်လာသော ပထမဆုံးချစ်သူလေးအား တင်းကြပ်စွာဖက်ထားယင်း
`ဂူးရာ မင်းဘာလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာမမွေးဖွားရတာလဲ၊ကိုယ်ကရောဘာလို့ မင်းတို့နိုင်ငံမှာ မမွေးဖွားရတာလဲ ...။´
ကလေးငယ်တစ်ယောက်လို မကျေမနပ်ရေရွတ်နေတာ ကြည့်ယင်း ဂူးရာ ကျွန်တော်အားနားလည်စွာ အနားတိုး၍ခပ်ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်သည်။
`မင်းမြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကိုယ်နဲ့တွေ့ရတာပေါ့၊မင်းသာ ပြင်သစ်လူမျိုးတစ်ယောက်ဆို ကိုယ်နဲ့တွေ့ချင်မှတွေ့ရမှာ´
`အမ် ...မင်းကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြောတာ...မောင်...ဟုတ်လား အဲ့ဒါဘာလဲ ဟင် ´
`သြော် အဲ့ဒါ ချစ်သူကောင်မလေးက ကောင်လေးကို အမြတ်တနိုးနဲ့ခေါ်တာလေ...အဲ့ဒီလိုခေါ်ယင်
ကောင်လေးက အရမ်းကြည်နူးရတယ် ...သူ့ ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်လို့ပြောနေသလိုဘဲ ...
`အဲ မုန်မဟုတ်ဘူးလေကွာ ....မောင်...´
`ဗျာ...ဗျာ ....ဗျာ ´
`ပျော်တာပေါ့...ဂူးရာ တစ်ခါမှမတွေးဖူးဘူး တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားလိမ့်မယ်လို့´
`မောင်လည်း အတူတူပါဘဲမောင့် အချစ်ရယ်ဘာဘဲ ပြောပြော မောင့်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေကို ဟောဒီရေကန်ကြီးအောက်က အကြွေစေ့လေး
တွေက သက်သေအဖြစ်အမြဲ အသိအမှတ်ပြုနေမှာပါ´
နိုစီယာနဲ့ လဲယာ က အတိုင်အဖောက်ညီနေကြသည်...ဂူးရာ ကတော့ရှက်ပြုံးလေးပြုံးနေသည်။
`အံမယ် ထွက်သွားတော့နှစ်ယောက်သား တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ ပြန်လာတော့ ဂူးရာ လက်ထဲ မှာနှင်းဆီပန်း
`ဟုတ်ပ အဖြူရောင်လေးက အချစ်ရဲ့သင်္ကေတပေါ့လေ´
ကျွန်တော် တို့ပန်းခြံထဲ က ထွက်တော့ရာသီဥတုက ချက်ချင်းပြောင်းသွားသည်။
မိုးသည်းသည်းအောက်ဝယ် ချစ်သူနှစ်ဦးရုပ်ရှင်သွားမကြည့်ဖြစ်တော့ဘဲ ပန်းခြံ အနီးကဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ
မဒိုနင် ၀င်စားကြသည်...။နောက်တော့ ဆေးရုံသို့ပြန်လာခဲ့ကြသည် လမ်း၌ပန်းဆိုင်မှ နှင်းဆီဖြူ(၇) ပွင့်
၁၁. ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခရီးလမ်းလေးကတော့သာယာလွန်းလှတယ်..
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြန်လှန်မှီခိုအားထားပြီး ချစ်ကြတာဆိုတော့
တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ ပိုတိုးပြီးချစ်ကြတယ်..မနက်စာ စားပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်
တို့ နှစ်ယောက် ဆာကောညီကီ..ပန်းခြံလေးထဲမှာလမ်းလျောက်ရင်းအကြင်
’’ မောင်…မောင့်အသံကို နဲနဲလောက်ဝေဖန်ကြည့်မယ်နော် ရမလားဟင်’’
’’ မောင့်အသံက ကောင်းတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် အရမ်းဆွဲဆောင်မှု့ ရှိတယ်
သိလား…ကျွန်မ တနေ့ နေ့ မောင့်သီချင်းသံမကြားရရင် ရင်ထဲမှာတစ်ခုခု လို
နေသလိုပဲ မောင်ရာ ’’
’’ ဟာ.. အချစ်ရယ်.. မောင့်ကိုဒီလောက်တောင်ပဲချစ်ရလားကွာ မောင်ကြည်နူးလိုက်
တာကွာ’’ သူမရှက်ပြုံးလေးနဲ့ ကျွန်တော့နားသယ်စပ်လေးကို ဖွဖွနမ်းရင်း
၁၂ .ဒီနေ့ ကျွန်တော့ဘေးကပ်ရက်ကုတင်ကသူငယ်ချင်းဂျိမာဆေးရုံပေါ်ကဆင်းခွင့်
ရတယ်…ရလဒ်ကောင်းနဲ့ ဆင်းခွင့်ရတော့သူ့ မျက်နာပေါ်က အပြုံးတွေ
က ဝင်းပလို့ဆေးရုံတစ်ခုလုံးကိုမမောမပန်းလိုက်နှုတ်ဆက်နေလေရဲ့ 
’’ လွမ်းရေ.. ကိုယ်ကတော့ရလဒ်ကောင်းနဲ့ ဆင်းခွင့်ရလို့ အရမ်းပျော်နေမိတယ်ကွာ’’
’’အေးကွာ.. တို့ လည်းမင်းကိုယ်စားအရမ်းပျော်ပါတယ်ကွာ’’
’’မင်းတို့ အားလုံးလည်း ငါ့လိုပဲအမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းလာပါစေကွာ’’
၁၃. “ဂူးရာ.. ဒီနေ့ ရာသီဥတု လေးအရမ်းကိုသာယာတာပဲနော်’’
’’ ဂူးရာမောင်တို့ နှစ်ယောက်ဟိုတစ်ခါက မိုးတွေ ရွာလို့ ရုပ်ရှင်သွားမကြည့်
’’ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ရယ် ..ခဏပဲစောင့်နော် အလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်လာခဲ့မယ်’’
ခြည်ကိုအန်တုပြီးအရဲလွန် အဝတ်စားတွေ ဝတ်ထားလေရဲ့ ဗျာ….နာရီကြည့်လိုက်
တော့ရုပ်ရှင်ချိန်နီးနေပြီ..ပြန်လဲခိုင်းဖို့ ကလည်းအချိန်မရှိတော့ဘူး သူမကိုဒီလိုအဝတ်
စားမျိုးနဲ့ မမြင်လိုပါ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့စိတ်ကူးထဲမှာသူမကို မြန်မာအဝတ်
စားလေးတွေနဲ့ မြင်ယောင်ကြည့်မိတယ်…သူမနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်တာပဲဗျာ…
၁၄. ၂ ယောက်သားကြင်ကြင်နာနာနဲ့ လက်ချင်းချိတ်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံကပြန်လာတော့ ဆေး
ရုံအဝင်ဝနားမှာ အန်ဒရေ့ ကိုလူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေတာတွေ့ ရတယ်
အန်ဒရေ့က ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက်ကိုမြင်တော့ လက်ယပ်ခေါ်သည်
’’ လွမ်း ဒါတို့ ဘေးကုတင်ကိုရောက်လာတဲ့လူနာသစ်ကွ နာမည်က သောမတ်တဲ့
.. သောမတ်ရေ ဒါက ကိုယ်ပြောတဲ့ လွမ်းသုခတဲ့ အဲဒီကမရွှေချောကတော့ဂျွန်နေးတဲ့’’
’’ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော့နာမည်ကသောမတ်ပါ..လွမ်းနဲ့ ဂူးရာအကြောင်းအန်ဒရေ့ ပြော
လို့ ကျွန်တော်သိပြီးပါပြီ လိုအပ်တဲ့ အကူညီလေးတွေ လဲပေးပါအုံးဗျာ ’’
သောမတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ အရွယ်ဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ ခင်ခင်မင်မင်ဖြစ်သွား
၁၅. ဒီနေ့ တော့အဆောင်မှာယူစရာလေးတွေရှိလို့ မနက်စာစားပြီးတော့..လူတွေအလစ်
အဆောင်ရောက်တော့လုပ်စရာရှိတာလေးတွေလုပ်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့တစ်
ဂူးရာနဲ့ သောမတ် ကခုံတန်းလေးတစ်ခုမှာထိုင်ပြီးစကားတွေပြောပြီးရယ်နေကြတယ်
ကျွန်တော့ကိုတွေ့ တော့ဂူးရာက အပြုံးလေးနှင့် လှမ်းခေါ်သည်
’’ ဟုတ်တယ်.. သူငယ်ချင်းတွေကဆွဲထားလို့ ’’
’’ ဒီမှာလေ သောမတ်က ဂူးရာမပျင်းအောင် ဟာသ လေးတွေပြောပြနေတာ’’
’’ ဟုတ်ပါတယ် လွမ်း ’’
’’ အော်….’’ ကျွန်တော်ပြန်ပြုံးပြလိုက်မိတယ် ဒါပေမယ့် ဒီအပြုံးကမပီပြင်နိုင်ဘူး
ဆိုတာတော့သိနေတယ် ဂူးရာကိုကြည့်တော့အရဲလွန်အဝတ်စားနဲ့၂ယောက်သား
ပူးပူးကပ်ကပ်လေးထိုင်လို့ စကားဆက်ပြောဖို့ အားမရှိသလိုခံစားလိုက်ရတယ်
’’ အင်း နားလေ မောင်… ဂူးရာတို့ ကတော့စကားဆက်ပြီးပြောဖြစ်အုံးမယ်’’
’’ အော် အင်းပါ ၂ ယောက်လုံးပဲ ကိုယ်သွားပြီနော်’’
ဂူးရာကိုပါတစ်ခါတည်းလက်ကဆွဲပြီးခေါ်လာချင်ပေမယ့် ရိုင်းရာကျမှာစိုးလို့ မခေါ်
၁၅ .ဒီနေ့ ကတော့ချစ်သောဂူးရာရဲ့ ၂၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ လေးပါ… သူငယ်ချင်းတွေ
အားလုံးပိုက်ဆံစုပြီးတော့မွေးနေ့ ပွဲလေးကိုဂူးရာတို့ အခန်းလေးထဲမှာပဲလုပ်ဖြစ်
ခဲ့ကြတယ်… ချစ်သောဂူးရာလေးကတော့ဒီနေ့ ထူးထူးခြားခြားလေးကိုလှနေတာ
ပဲဗျာ..မွေးနေ့ ကိတ်လှီးပြီးတော့ သူတို့ ရဲ့ဓလေ့အတိုင်းကစားပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ကြ
လှိန့် ပြီးကျတဲ့စာလုံးအတိုင်းမွေးနေ့ ရှင်ကလုပ်ပြရတဲ့ကစားပွဲလေးပါ..ဂူးရာကလေး
ထောင့်တုံးလေးကိုလှိန့် လိုက်တယ် ..’’ဗိုက်’’ ဆိုတဲ့စာလုံးပေါ်ကိုအတုံးလေးကရောက်
သွားတယ် ကျွန်တော်လဲတစ်ခါမှမကြုံဘူးတော့ သူမဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာစောင့်
ကြည့်နေလိုက်တယ်… အဲဗျာ.. ဂူးရာကကျွန်တော့ဘက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့ သူမ
ရဲ့အင်္ကျီကိုဗိုက်ပေါ်အောင်လှန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော့ကိုနမ်းခိုင်းတယ်… ကျွန်တော့
နေလိုက်တယ်..ကျွန်တော်လဲရှက်တက်တယ်ဗျ..ဂူးရာကတဖန် အတုံးလေးကိုလှိန့် 
လိုက်ပြန်တယ်..ဒီတစ်ခါလည်း’’ ဗိုက်’’ ဆိုတဲ့စာလုံးပေါ်ကိုပဲကျပြန်တယ်.. ဒီတစ်ခါ
၁၆. “ဂူးရာ.. မောင်မကြိုက်ဘူးကွာ..’’
’’ ဟင်.. ဘာကိုလည်းမောင်..အစပ်ဆက်မရှိပဲ ဘာကိုမကြိုက်တာလည်းဟင်မောင်’’
’’ အားလုံးပဲကွာ. သောမတ်နဲ့ ရီရီမောမောစကားပြောတာလည်းမောင်မကြိုက်ဘူး
’’ အော်.. မောင်ရယ် ဘာများလဲလို့ .. သောမတ်နဲ့ ကရိုးရိုးခင်တာပါ..အဝတ်အစား
’’မောင်အပြစ်ရှာတာမဟုတ်ဘူးဂူးရာ မောင့်ချစ်သူကိုချစ်လွန်းလို့သဝန်တိုလို့ ပြော
’’ မောင့်ကို ဂူးရာ ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမောင်လဲသိသားနဲ့ ’’
’’မောင်သိပါတယ်ဂူးရာ ဒါပေမယ့် မောင်ရဲ့မြန်မာစိတ်ဓါတ် မြန်မာမျက်စိနဲ့တော့နဲနဲမှ
ကို ဘဝင်မကျနိုင်ဘူးဂူးရာ..မောင်တို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်
ခင်ပွန်းမဟုတ်တဲ့သူစိမ်းယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ပွေ့ ဖက်နမ်းရှုပ်တာမလုပ်ကြဘူး..
ပြီးတော့ အရဲလွန်အဝတ်အစားဝတ်ပြီးယောက်ျားလေးတွေနဲ့ လည်းဖက်လှဲတကင်း
“အိုး ဒါမြန်မာပြည်မဟုတ်ဘူးမောင်.. မောင်ဒါမျိုးတွေလာပြောလို့ မရဘူး.. ဒါဒီနိုင်ငံ
ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံပဲ.. ဂူးရာတစ်ယောက်ထဲထူးထူးခြားခြား ပိုကဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး’’
၁၇. အဆောင်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ အဆောင်ကိုနေ့ လည်
စိတ်အသိနဲ့ ကြားမှာအဆုံးမရှိတဲ့လေဟာပြင်ကြီးကာဆီးသွားသလို ..အိမ်မက်ထဲ
လို့ မြန်မာပြည်ပြန်ရတော့မယ်တဲ့ဗျာ.. ၃ ရက်ပဲအချိန်ကရတော့တယ်… ကျွန်တော့
ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ ပြီးလုပ်စရာရှိတာ တချို့ လိုက်လုပ်ရတော့တယ်…
၁၈ .ဆေးရုံကိုညနေပြန်ရောက်တော့ ချစ်သောဂူးရာကို ခုံတန်းလေးမှာတစ်ယောက်
ထဲထို်င်နေတာတွေ့ လိုက်တယ်.. ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာစူးအောင့်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်
ပြီး ကျွန်တော့ကိုယ်ကျွန်တော် အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး ကျွန်တော့ရဲ့အ
ဖြစ်ကိုပြောပြဖြစ်တယ်. သူမကတော့ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော့ရင်ခွင်ထဲမှာငြိမ်ငြိမ်လေး
နဲ့ နားထောင်နေတယ်.. ဒါပေမယ့်သူမကျောပြင်လေးကတော့ တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ရှိုက်ငိုနေ
မှန်းသိသာတယ်..ချစ်သူနဲ့ ခွဲရမယ့်ဝေဒနာကိုနှစ်ဦးစလုံး ထပ်တူခံစားကြရတယ်
တော့ဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ တွေ့ ပြီးဆေးမှတ်တမ်းတွေ ယူ .. ဆေးရုံကဆင်းခွင့်တွေလုပ်
ရတယ်.. သိမ်းဆည်းစရာရှိတာတွေသိမ်းနေတုန်း ဂူးရာကကျွန်တော့ကိုလာပြီးကူ
သိမ်းပေးတယ်.. သူမမျက်ခွံလေးတွေက အရမ်းကိုမို့ အစ်နေတာတယ် ငိုထားတဲ့မျက်
နှာလေးကနီရဲနေတာပဲ.. ရင်တစ်ခုလုံးဟာလာဟင်းလင်းကြီးပဲဗျာ.. အားလုံးသိမ်း
ပွေ့ ထားပြီး စိုင်းထီဆိုင်သီချင်းလေးဆိုပြနေမိတယ်.. နှစ်ယောက်လုံးမှာပြောစရာ
စကားတွေကမဲ့နေပြီး နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးတွေက ညင်သာလွန်းတယ် သူမရဲ့မျက်
၁၉. သူငယ်ချင်းဖြိုးငယ်..ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရှိတဲ့ခုံတန်းလေးဘက်ကိုလျှေက်လာ
တာတွေ့ လိုက်ရတယ်.. သူကကျွန်တော့်ပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးကူသယ်ပေးတာလေ
’’ ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါတယ်ဖြိုး..ဒါပေမယ့် ရင်ခွင်တစ်ခုလုံးက နာပြီးလူကအားမရှိ
သလို ခံစားနေရတယ် ဖြိုး’’
’’ တစ်နေ့ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကြိုတွေးပြီးသားပါဖြိုးရယ်.. ခံနိုင်ရည်ရှိရမှာပေါ့’’
’’ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ.. ဂူးရာလည်းကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်နော် အမြန်ဆုံးပြန်ကောင်း
ပါစေဗျာ’’ သူမ မချိပြုံးလေးပြုံးသည် နောက်တော့ကျွန်တော့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်
ပြီး ’’ မောင့်ကို ဂူးရာမပြောရသေးတာရှိသေးတယ်.. ဂူးရာမှာအဆုပ် တစ်ခြမ်းပဲရှိတော့
တာ.. ခုထပ်ပြီး TB ရောဂါထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဆရာဝန်က ဂူးရာကို .. သိပ်ကြာ
ကြာမနေရတော့ဘူးတဲ့ မောင်ဝမ်းနည်းမှာစိုးလို့ မပြောပဲထိန်ချန်ထားတာပါ မောင်’’
လောကကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဗျာ ကျွန်တော့မှာလည်းစကားလုံးတို့ 
ပျောက်ဆုံးကုန်တယ် ကျွန်တော့အသဲနှလုံးတစ်စုံကိုလက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ညှစ် လိုက်သလိုခံစားလိုက်ရတယ်.. နောက်တော့သူမကပဲ
’’ မောင်တို့ နောက်ကျနေအုံးမယ် သွားတော့လေ… မောင်.. ဂူးရာ နောက်ဆို မောင်
မကြိုက်တဲ့အရဲလွန် အဝတ်တွေကိုမဝတ် တော့ဘူးနော် မောင်.. မောင်မဟုတ်တဲ့သူ
စိမ်းယောက်ျားလေး နဲ့ လည်းအရမ်းကြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးမနေတော့ဘူးနော်မောင် ’’
ကျွန်တော့ရင်တစ်ခုလုံးသူမကို ချစ်တဲ့အချစ်နဲ့ ပွင့်ထွက်သွားမလားတောင်ထင်ရတယ်
ဗျာ.. သူမရဲ့ နဖူးလေးကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်အနမ်းလေးပေးပြီး ကျွန်တော်သူမအနား
၂၀. ကျွန်တော့မှာအဆောင်ပြန်ရောက်တော့လည်း တစ်ချက်မှကိုမနားရပါဘူးဗျာ စီစဉ်
စရာတွေကများလွန်းတယ်..လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ဝယ်ရ.. သံရုံးသွားရနဲ့ နှစ်ရက်
ဆိုတဲ့အချိန်ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘူး … ရောက်ပါပြီ
ရှယ်ရယ်မြန်ကျယ်ဘာ.. လေဆိပ်ကို သူငယ်ချင်းဖြိုးငယ်နဲ့ သန့် ဇင်အောင်ကလိုက်
ပို့ ပေးတယ်.. လေယာဉ်က မနက် ၁၀ နာရီထွက်မှာ.. လေယာဉ်ပေါ်တက်ဖို့ နာမည်
တွေ ခေါ်နေပြီ .. ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုပွေ့ ဖက်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်
လေးကိုသတိရသွားမိတယ် ဖုန်းလေးကိုထုတ်ကြည့်မိတော့ဖုန်းထဲမှာ ပိုက်ဆံကသိပ်
’’ ဟယ်လို ..မောင်’’ အသံလေးကဖျော့တော့ပြီး အနားသတ်မှာလှိုင်းခတ်နေတယ်
’’ ဂူးရာ .. ရာ ကြည်ပြာ အိုးချင်း လုဘလူး( မောင်မင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်)’’
’’ ရာ သိုရှယ်ပါ.. မောင် (ကျွန်မလည်းမောင်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှချစ်တယ်)’’
လေယာဉ်ကြီးနဲနဲတုန်သွားတယ် လေယာဉ်စထွက်ပြီမှန်းသိလိုက်တယ်.. ဖုန်းထဲက
ပိုက်ဆံလည်းကုန်သွားလို့ ထင်တယ် လေလှိုင်းလေးလဲပြတ်တောက်သွားတယ်…
“ချစ်သောဂူးရာ ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို ခံစားချက်နှစ်ပိုင်း နဲ့ ရေးသားခဲ့ လို့ တန်ဆောင်တိုင် အမှတ်တရလေး အဖြစ် ပြန်လည်းခံစားပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်....
Posted by lwanthukha at 2:01 AM No comments:
ကောင်းကင်မှာ လတွေ တစ်စင်စပြီးတစ်စင်းကြွေနေချိန်မှာ
အချစ်စစ်ဆိုတာ ဖော်ထုတ်ခွင့်မရတဲ့ ပုံသေနည်းလား။
ဒဏ်ရာတွေ စုန်ဆန်ဆင်း ရထားတစ်စင်းလို ခုတ်မောင်းသွားချိန်မှာ
Posted by lwanthukha at 2:49 AM No comments:
ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသုံးပါးအားဦးထိပ်ပန်ဆင်၍ ဤ၀တ္ထု ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် ခံစားချက်နှင့်တကွမွေးဖွားပေးသော
မာတာပီတု မိဘနှစ်ပါးနှင့်ကျေးဇူးရှင်များ အပါအ၀င် အကြံပေးကူညီခဲ့ကြသောသူငယ်ချင်း
ဖြစ်သော ငယ်နှင့် သဘာဝ အလှတို့ ဖြင့်ထာဝစဉ်ဝေဆာနေသည့် ပန်းမြို့တော်ဟုတင်စားထားသော
ပြင်ဦးလွင်မြို့တော် တို့အား အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းဤ
ကျွန်တော်လေ ဟောဒီ မိကီဝေး ရဲ့ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ
စင်္ကြာဝဠာရဲ့ခရီးကိုသွား ဖို့ကြယ်တစ်စင်းရှိယင် ဖြစ်တယ်.....။
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ရောင်နီနေ့ရက် ပန်းလိုဆက်ဖို့ ရွှေရင်မြမြ ပင်ပန်းလှလည်း တစ်နေ့တစ်ရက် မေ့ရခက်မို့ ချစ်မိသူသာ အပြစ်ပါ...ငယ်။ ။ လွမ်းသုခ(ဗေဒါ)
Russian Speaking Tour Guide profile
Гид-экскурсовод в Янгоне Вин Мьянма
Zawgyi-one Web Text Editor 1.5.4 မြန်မာဖောင့်မရှိသူများနှင့် လတ်တလောအသုံးလိုသူများဤနေရာတွင်ရိုက်နိုင်ပါသည်။
တွေနဲ့တင်းကျပ်၊ အလွမ်းတွေကိုငွေ့ရည်ဖွဲ့တတ်တဲ့သာမန် တိမ်တိုက်တစ်ခုပါဘဲ ...တတ်၍ရေးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ခံစားချက်သက်သက်သာအရင်းတည်ထားပါသည်။
ု`လောကမှာအချစ်နှစ်မျိုးဘဲရှိတယ် ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တာနဲ့သူများကိုချစ်တာ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တုန်းကပြဿနာမရှိပါဘူး။အဲ......သူများကိုချစ်မိယင်တော့ ဒုက္ခဆိုတဲ့မိုင်းကွင်းထဲကို ခြေချမိတာပါဘဲ ´
bgks.words.jpg (image)ဒီမှာ click လုပ်ပါ
အိုကိစု ၏ ဒီဂျေလေးရေးထားတဲ့ ဒိုင်ယာရီ
ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပျိုးတဲ့ပန်း (1)
လွမ်းသုခ နှင့်သူ၏လမ်း (1)
လွမ်းသုခ နှင့် အဖြူရောင်များ (1)
Программа Путешествия (5days sightseeing and5days at the Famous beach Ngapali in Myanmar) DD/MM/YY ( ......../........ ) Вы...
(၁) သူတို့ အခေါ်တော့ ကာပြင်ညီစာပေါ့၊အနီရောင်ဆေးရည်တွေ ခန္ဒာကိုယ်အနှံ့စီးဝင်နေတယ်။ဒရင်းဘတ် ပေါ်မှာသက်တောင့်သက်သာနေရတယ်ဆိုပေမယ့် ဆေးတစ်ပုလ...
Г де удивительных достопримечательностей по всему миру ? Как Знакомство с ними ? Страна, которая был...
ကောင်းကင်မှာ လတွေ တစ်စင်စပြီးတစ်စင်းကြွေနေချိန်မှာ ငါ့ကိုယ်ငါ နွေပါလို့မညည်းချင်တော့ဘူး၊ သိက္ခာတရားတွေကာရံထားတဲ့ရွာမှာ အချစ်စစ်ဆိုတာ ဖော်ထုတ...
ကျွန်တော် တက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ Myanmar Development Resources Institute (MDRI) လက်အောက်မှာရှိတဲ့ Center for Strategic and I...
သူငယ်ချင်းရေ နင်စားဖို့ စတော်ဘယ်ရီသီး လိုက်ရှာဝယ်လိုက်ရတာ မောနေတာဘဲ ...ငါပြင်ဦးလွင် မသွားဖြစ်တော့ဘူး...ဒါရန်ကုန် စတော်ဘယ်ရီနော် ... ငါ...
ငါ့ဘ၀ဇတ်ခုံမှာ တစ်ကွက်ဆန်းဆန်း ကခဲ့ယုံနဲ့ ကျေနပ်ရမှလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှုပ်ထားတဲ့ကြိုးတွေအောက်မှာ နေသားမကျတာငါညံ့လို့ဘဲ ဖြစ်မှာပါ နေချင်တဲ့ဘ...
Эпизод-1 Это называется капельница на русском языке. Красная жидкость Медицинская поступали в мое тело. Я думаю, как я мечтал ...
နှလုံးသွေးတို့ ၀ုန်းဝုန်းကြွ ရုန်းထလာတဲ့ကဝေပျို နေ့နဲ့ညကိုဖောက်စားလို့ ကြောက်အားလည်းပို ခြေတော်တင်ရန်လှမ်းဆက် ကမ်းတဲ့လက်ကရေတွေစို ရင်ခုန်အော...
သင်္ကြန်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ရင်ကို တစ်နှစ်တစ်ခါပုံမှန်ခေါက်တဲ့ သံချောင်းလေးတစ်ခုပါ၊ဒီတစ်ခါလည်း ရင်ဘတ်ထဲက ရှိုက်သံတွေကို ဥပက္ခာပြုပြီး ကျွန်တော့်ရင...
ကဗျာမရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာလူရိုင်းတွေဘဲနေတယ်.... Picture Window theme. Powered by Blogger.